China oyi kpọnwụrụ Sie anụ ehi Ire na ndị na-emepụta | Huikang
A na-ekewa nri friji n’ime nri jụrụ oyi na nri oyi. Ihe oyi dị mfe iji chekwaa ma jiri ya na mmepụta, njem na nchekwa nke nri na-emebi emebi dịka anụ, anụ ọkụkọ, ngwaahịa mmiri, mmiri ara ehi, akwa, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi; ọ na-edozi ahụ, na-adaba adaba, na-edozi ahụ ma na-echekwa ihu ọha; Ọchị ahịa a na-achọ buru ibu, ọ na-enwe ọnọdụ dị mkpa na mba ndị mepere emepe, ọ na-etolite ngwa ngwa na mba ndị na-emepe emepe.
Nri oyi: ọ dịghị mkpa ka oyi kpọnwụrụ, ọ bụ nri na ọnọdụ okpomọkụ nke nri na-ebelata iji mechie ebe oyi na-echekwa ma chekwaa na ọnọdụ a.
Nri oyi: Ọ bụ nri a na-echekwa n’okpuru okpomoku dị n’okpuru ebe oyi kpọnwụrụ akpọnwụ.
A na-akpọkarị nri ndị jụrụ oyi na nri oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, nke enwere ike kewaa ụzọ ise: mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ngwaahịa mmiri, anụ, anụ ọkụkọ na akwa, osikapa na ngwaahịa noodle, na nri dị mma dị ka ngwa na usoro oriri si dị.
Francis Bacon, onye Britain bụ onye edemede na onye ọkà ihe ọmụma na narị afọ nke 17, gbalịrị itinye snow n'ime ọkụkọ iji mee ka ọ kwụsị. N’ụtụghị anya, ọ jidere oyi wee daa ọrịa. Ọbụna tupu nnwale na-adịghị mma nke anụ ezi, ndị mmadụ maara na oke oyi nwere ike igbochi iri anụ "na-aga njọ." Nke a mere ka ndị nwe ụlọ bara ọgaranya dozie ụlọ ebe a na-ere ice na ebe obibi ha nke nwere ike ichekwa nri.
Ọ dịghị nke ọ bụla n’ime mgbalị ndị a emere n’oge gboo iji gboo nri butere isi ihe kpatara nsogbu ahụ. Ọ bụghị oke ogo nke oyi, dị ka ọ bụ ọsọ nke na kekwa, na ọ bụ isi ihe na-akpụkọta anụ. Ikekwe onye izizi ghọtara nke a bụ onye America na-echepụta ihe bụ Clarence Birdseye.
Ọ bụghị n’afọ ndị 1950 na 1960, mgbe ndị refrjiraeto ezinụlọ bịara bụrụ ndị ama ama, ka a malitere ire nri friji buru ibu. N’oge na-adịghị anya ka nke ahụ gasịrị, ọkpọ ndị ama ama na-acha uhie uhie, ọcha, na-acha anụnụ anụnụ nke Boz Aiyi dị na ụlọ ahịa n’ọtụtụ akụkụ ụwa wee bụrụ ihe ama ama.
Afọ ole na ole mgbe Agha Iwa Mbụ gasịrị, Bozee mere ọnụ ọgụgụ nke osisi ọhịa mgbe ọ na-eme njem na Labrador Peninsula na Canada. Ọ chọpụtara na ihu igwe dị jụụ nke na azụ bara azụ nke ukwuu mgbe o jidere azụ. Ọ chọrọ ịmata ma nke a ọ bụ isi ihe na-echekwa nri.
N'adịghị ka Bacon, Birdseye biri n'oge friza. Mgbe ọ laghachitere ụlọ na 1923, ọ nyochara na friza na kichin ya. Ọzọ, Boz Aiyi gbalịrị ịjụ ụdị anụ dị iche iche na nnukwu osisi na-ajụ oyi. Birdseye mechara chọpụta na ụzọ kachasị ọsọ iji kpọnwụ nri bụ ịpịkọta anụ n'etiti efere ọla abụọ friji. Ka ọ na-erule afọ ndị 1930, ọ dịla njikere ịmalite ire nri oyi kpọnwụrụ emepụtara na ụlọ ọrụ Springfield, Massachusetts.
Maka Boz Aiyi, nri oyi kpọnwụrụ ngwa ngwa ghọrọ nnukwu azụmaahịa, ọbụnakwa tupu ọ mepụta usoro arụmọrụ dị okpukpu abụọ nke na-arụ ọrụ nke ọma, ụlọ ọrụ ya ajụla mkpụrụ tọn 500 na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri otu afọ.
Nkwalite ngwaahịa Akụrụngwa sitere na ebe a na-egbu anụ na ụlọ ọrụ ndebanye aha mbupụ na China. Tumadi mere na China.
Nkọwapụta ngwaahịa Iberi na dais, tinye eriri
Atụmatụ ngwaahịa Ọ nwere uto pụrụ iche nke ire ehi
Tinye ọwa Usoro nri: ighe na imi ihe.
Enwere ike ịkọwa ire beef, roara n'ọkụ ma ọ bụ sie ya. Asụsụ ndị a na-ere n'ahịa ụfọdụ adịla njikere iri nri, mana a na-enweta asụsụ dị ọcha, anwụrụ anwụrụ ma ọ bụ nke a na-adịghị etinyekarị nnu. Mgbe isi nri, ọ dị mma ma a na-enye ya ọkụ ma ọ bụ oyi, ma ọ bụ na-enweghị oge. A na-eji ire nnu nnu esi nri ya ma jiri ya bee ya. A na-enyekarị ha oyi. A pụrụ iji mmanya sie ma ọ bụ sie sie asụsụ dị iche iche ma jiri ya rụọ ọrụ dị iche iche. Ire ehi na anụ mgbịrịgba bụkarị nke a na - ahụkarị, dị ka ire ehi n’izu.
Nke gara aga: Friji sie anụ ezi anụ
Osote: Oyi kpọnwụrụ kpọnwụrụ Cut Carọt
Anụmanụ na-agba ọsọ ọsọ na-agba agba